Shirkadda Kenya Airways oo Duulimaad Maalinle ah ka bilaabeysa Garoonka Aden Adde ee Muqdisho - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Shirkadda Kenya Airways oo Duulimaad Maalinle ah ka bilaabeysa Garoonka Aden Adde ee Muqdisho
Shirkadda Kenya Airways oo Duulimaad Maalinle ah ka bilaabeysa Garoonka Aden Adde ee Muqdisho
Shirkadda Diyaaradaha dalka Kenya ee Kenya Airways ayaa maanta ku dhawaaqday inay duulimaad maalinle ah oo toos ah ka bilaabeyso magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Bayaan uu soo saaray guddoomiyaha Shirkadda Kenya Airways Sebastian Mikosz ayaa lagu sheegay in duulimaadyada shirkaddu ku tegeyso Muqdisho oo maalinle noqon doona ay ka dambeeyeen kororka dhoofayaasha Soomaalida ah iyo kuwa Gobolka, iyadoo ay sii xoojin doonto isku xirka dalalk Gobolka.
Duulimaadyada shirkadda Kenya Airways ee Adan Adde Airport, magaalada Muqdisho ayaa bilaaban doona 15-ka bishan November, waxayna diyaaradda ugu horeysa ee tegeysa Muqdisho oo nooceedu yahay Bombardier Dash 8 Q400, ay ka duuli doontaa Garoonka Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) ee magaalada Nairobi Khamiista soo socta saacadu markey tahay 07:40, iyadoo ka degi doonta Aden Adde International Airport, 10:45, kadibna dib ugu laaban doonta Nairobi xilliga 13:00.
Kenya Airways aya noqoneysaa shirkii labaad ee Afrikaan ah iyo tii saddexaad oo caalami ah oo duulimaad ka bilowda magaalada Muqdisho, iyadoo toddobaadkan ay duulimaadkeeda Muqdisho ka bilowday Ethopian Airlines, waxaana hore uga howlgaleyay Turkish Airline.
Bayaan lagu garab istaagay Dowladda Somalia oo kasoo baxay shirkii Madaxda Somalia, Ethopia & Eritrea (Akhriso)
Guddoomiyaha G/Banaadir oo shaqadii ka joojiyey La-taliyihii Saxaafadda iyo Shirkadda Bilicsan (Qoraallo)
Galmudug oo Abiye Axmed ku taageertay dagaalka Tigrey